Google mikapoka an'i Apple | Avy amin'ny Linux
Hyuuga_Neji | | About us
Fotoana vitsy lasa izay dia vaovao izany fahazoana an'i Motorola avy amin'i Google ary maro no nanombatombana fa ilay "goavambe amin'ny Internet" dia nitady ny "toerana misy azy" amin'ny finday nanomboka tamin'ny nahazoany Motorola ny ho avin'ny Android izany dia hanomboka hitranga amin'ireo fitaovana ireo.
Androany aho nahazo Tweet avy amin'i @Renata_Franco (olona tsy fantatro manokana fa mahafinaritra ny mamaky ny hevitrao) izay ilazany tetika ara-dalàna vaovao ho azy Google hiarovana ny fampiasam-bolanao.
Hita fa natomboka hiaro ilay "super company" Motorola swashbuckling amin'ny zazalahy avy any La Manzanita (Apple) izay nanandrana nandrara ny fampiasana any Etazonia ny fitaovana izay tsy maintsy Android amin'ny maha rafitra miasa. Apple dia nanao ny azy ary nanana tany amin'ireo orinasan'asa toa azy HTC, Samsung y Motorola tamin'ny fitoriana ara-dalàna saingy niova tanteraka ny toe-javatra rehefa nanomboka izany Motorola ampahany amin'ny fianakavian'i Google.
Google y Motorola Nilalao tamim-pahakingana izy ireo ary ankehitriny dia nandeha tany amin'ny fitsarana niaraka tamin'ny fitoriana izay tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra madinidinika toy ny fampiasana sary masina na tsia, fa amin'ny fandikana ny patanty ataon'ny patanty tsy mahazatra an'ny Apple.
Araka ny Ity lahatsoratra ity Tsy tena fantatra hoe inona ilay patanty fa fantatra fa misy ifandraisany amin'ny fampiasana Wi-Fi. Ny tsy fitoviana Motorola y Apple efa notsaboina hatramin'ny 2010 fa toa izany Apple tsy narahina velively ny fanambaran'i Motorola.
Ireo hetsika "fifandonana titans" ireo dia miteraka fikorontanana be eran'izao tontolo izao satria amin'ny farany ireo izay hijaly dia isika, ny mpampiasa farany, izay toy ny hatrany ny rohy malemy indrindra ao amin'ny rojo ary tsy misy feo na mifidy ireo ady ireo. Amin'ny lafiny iray, ny fangatahana Google avy eo Apple hiditra amin'ny zavatra tsy misy hafa ary tsy kely noho ny amin'ny iray amin'ireo orinasa manan-kery indrindra amin'izao fotoana izao ary raha ny hevitro manokana dia zavatra iray no manana eo anoloan'ny Motorola ary zavatra iray hafa ny fananana eo alohan'ny milina fanaovana dokambarotra lehibe indrindra amin'izao fotoana izao (Google).
Amin'ny farany, manantena izahay fa samy hahita vahaolana ny roa tonta ary izy ireo no manimba indrindra amin'ny mpampiasa ny iray na ny Operating System.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Google mikapoka an'i Apple
Toa tsara amiko, nanomboka nanapaka ny baolina tamin'ity patanty ity ny paoma ary ny motorola dia manana patanty matanjaka kokoa, toy ny CELL PHONE fa diso aho ...
ataovy mandatsa-dra izy ireo!
ny hala miady amin'ny elefanta, amin'izao fotoana paoma izao ihany no hala ny spider fa manorotoro azy ireo google
Tsy olo-masina i Google ary, raha ny marina, tsy dia tiako loatra ny fihetsiny amin'ny ankapobeny, saingy toa tena tsara ny fanafihany an'i Apple, satria io orinasa ratsy io, miaraka amin'ny politika misy azy dia manjaka amin'ny kapitalista masiaka indrindra, dia miteraka fahavoazana lehibe tsy. ny indostrian'ny solosaina ihany, fa ny kolontsaina amin'ny ankapobeny, ny te handray ny hevitra, tsara ho an'ny zanak'olombelona, ​​ho an'ny vola madinika vitsivitsy.
Apple, voaro amin'ny korontana maloto ny patanty (izay tsy miaro na inona na inona afa-tsy ny tombotsoan'ireo orinasa lehibe indrindra, ireo izay mitsentsitra rà), ny hany zavatra tadiaviny dia ny hamehezana ny fifaninanana hanakorontanana ireo orinasa kely kokoa, ary amin'izany, mikendry ampihimamba na, farafaharatsiny, amin'ny oligopoly.
Mahafinaritra fa misy ny olona miteny zavatra tsy misy fanatisme azy.
Manoratra tanteraka amin'ny teninao aho. Manaiky tanteraka.
Manaiky tanteraka, ny olan'ny patantin'i Apple dia mikatona amin'ny hadalana, matahotra tokoa ve ny hifaninana?
Mampahatsiahy ahy ny hira taloha iray ity: "Miadia amin'ireo goavambe, avadiho ho lasa gazy voajanahary ny rivotra ..." 🙂 Ireo gorila roa (Google sy Apple) ireo dia mahatonga an'i Microsoft ho toa zazalahy tsara ankehitriny.
Toa tsara amiko, Google dia mandoa ny Apple ny patanty rehetra nampiasain'i Apple nanomboka ny taona 2007 ary tsy mandoa denaria iray akory dia miresaka momba ny fanaovana kopia sy ny hafa izy ireo fa tsy mandoa patanty amin'ireo zavatra efa noforonina sy mampiasa ny fitaovany. .
Angamba amin'ity fomba ity no ampahatsiahivin'i google an'i apple fa tsy irery izy ireo eto amin'izao tontolo izao ary amin'ity teknolojia ity, ny zava-baovao rehetra atao dia vita amin'ny vato efa noforonin'olon-kafa!
«Amin'ity haitao ity, ny zava-baovao rehetra vita dia vita amin'ny vato efa noforonin'olon-kafa»
Ary tsy amin'ny sehatry ny haitao ihany. Nandritra ny tantaran'ny zanak'olombelona dia natsangana ny kolontsaina noho io toetra io, izay hita amin'ny litera sy zavakanto hafa, amin'ny fivoarana teknolojia samihafa, sns.
Avelako ilay rohy mankany amin'ny fanadihadiana iray tena mahaliana izay miresaka momba an'io: remix ny zava-drehetra, nataon'i Kirby Ferguson: http://vimeo.com/42393680.
Efa leo an'ireo patanty rehetra ireo aho isan-kerinandro dia misy ny fangatahana vaovao
Tokony raràna ny manome patanty zavatra tena ilaina. Ry Andriamanitra tsara ô, nandroaka an'i samsumg i Apple satria ny paoma dia mino fa manana ny mahitsizoro mainty izy ireo. Mihalasa mihomehy ny patanty.
Manaiky tanteraka. Tsy mitombina sy tena izy io. Manontany tena aho hoe inona no ananan'ireto orinasa ireto bebe kokoa, raha programmer na mpisolovava, satria mazava ho azy fa any amin'ny fitsarana ny toerana tsy ijanonany.
Ho an'ireo orinasa mega goavambe toa an'i Google, Apple na Microsoft, ny zavatra farany manandanja azy ireo dia ireo mpampiasa. Tonga ny fotoana iray izay ny hany ahiahin'izy ireo dia tsy ny vola intsony, satria tsy maintsy manarona an'izao tontolo izao amin'ny volamena izy ireo, fa kosa manitatra ny fanjakany manerana an'izao tontolo izao, izay ilain'izy ireo ny manafoana ireo mpifaninana. Noho izany ireo fifandonana ireo.
Afaka mankany amin'ny helo daholo izy ireo ho ahy.
Fahafatesan'i Apple !!!!